Steve Jobs maskaxdii Technologyadda - NETBEINS
:Steve Jobs maskaxdii Technologyadda
Steve Jobs maskaxdii Technologyadda
Abdulfattah John Jandali, waa Siiriyaan carab ah, kana soo jeeda qoys maal qabeen ah. Sidii caadada ahayd xilligaas, carruurta bariga dhexe ee reerahoodu hantida haystaan waxey waxbarasho u aadi jireen Lubnaan, Beyruut, gaar ahaan American University of Beirut. Cabdulfataax Jandali isaga oo halkaas kasii wata waxbarashadiisa ayey qalalaase siyaasaddeed ka billowdeen Lubnaan, oo waxaa jiray […]
By admin June 8, 2019, 6:09 AM
Abdulfattah John Jandali, waa Siiriyaan carab ah, kana soo jeeda qoys maal qabeen ah. Sidii caadada ahayd xilligaas, carruurta bariga dhexe ee reerahoodu hantida haystaan waxey waxbarasho u aadi jireen Lubnaan, Beyruut, gaar ahaan American University of Beirut. Cabdulfataax Jandali isaga oo halkaas kasii wata waxbarashadiisa ayey qalalaase siyaasaddeed ka billowdeen Lubnaan, oo waxaa jiray bannaan baxyo lagu dalbanayey in uu is casilo madaxweynihii Lubnaan ee xilligaas Bechara El Khoury.
Arrintaas waxey kalliftay in Cabdulfataax Jandali u dhoofo dalka Mareykanka, magaalada New York, isaga oo la noolaa qoyska safiirkii UN ka ee Siiriya Najm Eddin al-Rifai oo ay qaraabo ahaayeen. Waxbarashadiisa ayuu halkaas kasii watay, intii uu jaamacadda ku jiray waxey is barteen gabar ka dhalatay qoys Jarmal ah, laakiin masiixi diinta ku ad adag ah. Gabadhii iyo Cabdulfataax Jacayl ayaa dhex maray, ilaa ay fasaxa isla tagaan magaalada Homs, Siiriya oo Jandali qoyskiisu deganaa.
Gabadhii uur ayey qaadday, laakiin waxaa diiday iney uurka sii lahaato aabbaheed oo ahaa nin diinta Masiixiga ku ad-adag, isagoo dalbanaya in eysan nin Carab Muslin ah waxba ku darsan karin, guursanna doonin, sidaas darteedna ilmahaan iska soo tuurto. Gabadhii waxey go’aansatay ineysan ilmaha soo tuurin, laakiin marka uu dhasho ay siiso cid korsata, waxeyna soo aadday Sanfransisco, California.
Halkaan waxaa ku yaalla isbitaal ay leedahay duq waayeel ah, taas oo gabdhaha raba iney ku dhalaan ka caawisa iney maalmo hore halkaas sii joogi karaan, sidoo kale waxey ka caawisa iney ilmahooda siiyaan ciddii ay la jecel yihiin.
Gabadhii markii ay timid isbitaalkii waxey ka codsatay islaanta ummulisida ah in cunugeeda ay u rabto cid waxbari karta, siina karta nolol aad u heer sarreysa, maaddaama aabbihiis hantiile yahay, laakiin uusan calfan.
Ummulisadii waxey u sheegtay iney jiraan islaan takhtarad ah iyo nin Lawyer ah, oo raba cunug ay korsadaan, kuwaasna ay siin karto cunugga. Gabadhii waxey dhashay wiil, laakiin qoyskii lagu heshiiyey iney qaataan cunugga ayaa ka baxay, oo waxey yiraahdeen gabar ayaa noo fiican, wiil na ma rabno. Waxyar kadib waxaa yimid lammaane 10 sano is qabay, laakiin aan waxba isku dhalin oo lagu magacaabo Paul iyo Clara Jobs, iyaga ayaana saxiixay warqaddii korsashada ilmaha (adoption letter), iyaga oo ballan qaaday iney wax bari doonaan inkastoo ay ahaayeen qoys faqri ah.
Cunuggaas waa Steve Jobs, aas-aasihii iyo maskaxdii ka dambeysay Shirkadda Apple ee ah maanta shirkadda dunida ugu qaalisan, marka laga yimaado Google iyo Amazon oo iyaguu hadda kusoo biiray tartanka.
Sidii ballanku ahaa Paul iyo Clara waxey u noqdeen Steve aabbe iyo hooyo fiican, waana ku dedaaleen waxbarashadiisii. Inkastoo 5 jirkiisiiba uu ogaaday ineysan ahayn qoyskaan Hooyadii iyo Aabbihii saxda ahaa ee dhalay, laakiin haddana weligiis ma dareensiin oo wax aan hooyo iyo aabbe ahayn uguma yeerin. Wuxuu waxka bartay dugsiga sare ee la yiraahdo Cupertino Junior High, kadibna Homestead High School, Cupertino, California.
Dugsiga sare markuu dhammeeyey Steve waxaa ku beermay rabitaan iyo xiiso waalli ah oo uu u qabay teknoloojiyada iyo farsamada casriga ah. Wuxuu ka qeyb gali jiray muxaadarooyinka iyo tababbarada la xariira teknoloojiyada oo inta badan ay soo qabanqaabin jirtay shirkadda kombiyuutarrada ee HP ama Hewlett-Packard, halkaasna waxey isku barteen Steve Wozniak, oo ahaa Engineer sare oo u shaqeyn jiray shirkadda HP. Steve, 1972-dii ayuu ku biiray Reed College, laakiin simister uu dhiganayey kadib waa uu isaga tagay, markaas ayaana ugu dambeysay waxbarasho.
Inkastoo uu waxbarashada ka haray haddana College-ka horay ugama uusan tagin; oo wuxuu seexan jiray dhulka qolalka saaxiibadiisa inta kartoon iyo wax dhigto, biyaha iyo cuntada ay saaxibadiisa soo reebaan ayuu cuni jiray, inta xiisadaha lagu jirana beerta iskuulka ayuu isaga dhex wareegi jiray.
Steve, 1974 ayuu shaqo ka helay shirkad sameysa Video Games oo lagu magacaabo Atari, wuxuuna si joogta ah u tagi jiray madal la yiraahdo Homebrew Computer Club, oo lagu wadaagi jiray fikradaha cusub inta badanna ay isugu imaan jireen Injineerrada kombiyuutarka ka ku xeeldheer. Waxa ay halkaas markale isku arkeen Steve Wozniak oo ah ninkii u shaqeynayey HP.
Waxaa jiray wiil ay Steve Jobs College-ka saaxiib ku ahaayeen, oo markaas aaday Hindiya, kadibna lasoo xiriiray oo ku dhiiragalyey Steve inuu Hindiya soo booqdo, isagoo u sababeynaya inuu halkaan ku sameyn karo waxa loo yaqaan Meditation, oo ay Hindidu caan ku tahay. Steve nin saaxibkiis ah ayuu horay usii watay, wuxuuna aaday Hindiya, waxaa aad loo rumeysan yahay inuu ahaa safarkaas kii badalay noloshiisa.
Markuu safarka kasoo noqday Steve Jobs wuxuu la kulmay saaxiibkiis Steve Wozniak, waxeyna ku heshiiyeen iney sameeyaan shirkad Kombiyuutar, waayo Steve Wozniak wuxuu ku fiicnaa sameynta maskaxda kombiyuutarka; Mother Board iyo Circuits ka. Waxey ku hawl billaabeen Garaash ku yaalay guriga Steve Jobs oo ay ka buuxeen baabuur farsamo xumo loogu keenay aabbihiis.
Markii halkaas ay ku sameeyeen Computer dhammeystiran, loona baahday in la badiyo, oo wixii laga dhigo shirkad, waxaa lagama maarmaan noqday maalgelin lacageed iyo magac. Magacyo badan oo ay isku soo qaadeen kadib, waxey doorteen Apple, sababtuna waxey ahayd in Steve Jobs qudaarta aad u jeclaa, sidaas darteed markasta oo wax laga fikiro waxaa kusoo dhici jiray miro iyo geed.
Kombiyuutarkii kowaad markii ay soo saareen waxey uga qeyb galeen carwo lagu soo bandhigo fikradaha cusub iyo kombiyuutarrada, markaas oo aad loogu qoslay, lana rumeysan waayey in labo wiil Computer dhammeystiran sameyn karaan, laakiin waxey halkaas kula kulmeen Mike Markula oo horay uga tirsanaan jiray shirkadda Intel. Mike wuxuu ahaa maalgeliyahoodii kowaad ee shirkadda, isaga oo ku maalgaliyey $250,000, ugana beddeshay 30% share ah. Sidoo kale, Mike waa ninka u diyaariyey shirkadda qorshe ganacsiyeed keedii kobaad Business Plan, ka shaqeeyey sidii shirkadda bannaan ka loo keeni lahaa, loona soo bandhigi lahaa wax soo saarkeeda.
1 dii April, 1976, magaalada Cupertino, California, ayaa si rasmi ah loo ga furay shirkadda Computerada ee Apple, ugana soo wareegtay garaashkii ku yaalay xaafadda Steve Jobs, dhisme dabaq ah, qurux badan oo ay iyaduna leedahay, ayna usoo shaqa tagayeen boqolaal shaqaale ah.
Sanadkii 2005 Steve Jobs mar uu xaflad qalin jabin ah kala qeyb galay ardeyda jamaacadda Stanford, wuxuu ka jeediyey qudbad uu ciwaan uga dhigay (Stay Hungry, Stay Foolish). Wuxuu qudbaddiisa kusoo qaatay saddex arrimood oo qasaare u ahaa markii hore laakiin gadaal u shaqeeyey, uuna ku faa’iiday. Tan kowaad waxey ahayd inuu wacal ahaa, aabbihiisna uusan garaneyn, ayna korsadeen qoys faqri ah, taasina ay bartay duruufta nolosha iyo iney waajib tahay inuu dunida baro qofka uu yahay maaddaama loo aqoonsanyahay wacal.
Tan labaad waxey ahayd inuu ka haray waxbarashada, taasina loo arki karay qasaaro ku billaabatay noloshiisa, wuxuu yiri waxaa igu kallifay inaan ka haro College-ka, waxaan hami u waayey waxbarashada, sidaas darteed waxaan diidayey inaan lacagta ka qasaariyo hooyada iyo aabbaha i korsaday. Wuxuu yiri waxaan ka codsaday maamulka inaan iska dhex joogo kuleejka, marka maalin ayaan fasal daaqaddiisa soo istaagay, waxaa fasalka lagu baranayey qeybaha ay u kala baxdo farta wax lagu qoro, waxaa maskaxdeyda ku dhagtay oo aan maalin taas bartay farta la yiraahdo Times New Roman, waana tii aan u isticmaalnay markaan soo saarnay Computer kii Macintosh, inaga ayeyna naga qaadatay Microsoft. Inaan waxbarashadii ka haray waxey igu sii xoojisay iney waajib tahay inaan dunida wax kusoo kordhiyo anigoon waxbarasho gelin.
Tan ugu dambeysa ee iyaduna xanuunka lahayd waa in laga cayriyey shirkaddii uu aas-aasay magaceeda keenay, dadka baray ee Apple 1985-kii. Wuxuu leeyahay haddaan la i cayrin lahayn anna ma ogaadeen qofkaan ahay, Apple na ma ogaateen oo dib iiguma yeerteen 1997 dii, markaas oo ay sii dhimaneysay Apple, anna aan sabab u ahaa soo noqoshadeeda.
Wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey, “Qofna majecla dhimashada, xitaa kuwa loogu bishaareeyey jannada ma rabaan iney horay ka dhintaan. Sidaa oo ay tahay dhimashadu waa daruuri, waana jidka keliya ee ina kulmiya dhammaanteen, waana iney dhintaan kuwa waaweyne si wadada loogu banneeyo jiilka soo koraya, sidaas darteed waxaa la iga helay Cancer, nolosheydana waxaa ka haray maalmo tirsama.” Lix sano kadib maalintii uu hadalkaas jeediyey, 5 tii October 2011 ayuu dhintay Steve Jobs, una dhintay cudurka Cancer-ka.
Waxaa inaga tala ah inaad sii baarto taariikda iyo qisooyinka hoggaamineed iyo hal-buur ee laga qoray Steve Jobs.
Aabe ku aaway?